Ndị Ikpe 9 Baịbụl Nsụgharị Ụwa Ọhụrụ nke Dị n'Ịntanet
Ndị Ikpe 9:1-57
9 Ka oge na-aga, Abimelek+ nwa Jerọbel gakwuuru ụmụnne nne ya na Shikem+ wee malite ịgwa ha na ezinụlọ dum nke nna nne ya okwu, sị:
2 “Biko, kwuonụ ihe a ná ntị ndị niile nwe ala Shikem, ‘Olee nke kaara unu mma, ọ̀ bụ ka ndị ikom iri asaa,+ bụ́ ụmụ Jerọbel niile, chịwa unu, ka ọ̀ bụ ka otu onye chịwa unu? Chetakwanụ na mụ na unu bụ otu ọkpụkpụ na otu anụ ahụ́.’”+
3 Ụmụnne nne ya wee malite ikwu ihe ndị a banyere ya ná ntị ndị niile nwe ala Shikem, obi ha wee dị n’ebe Abimelek+ nọ, n’ihi na ha sịrị: “Ọ bụ nwanne anyị.”+
4 Ha wee were mkpụrụ ego ọlaọcha iri asaa n’ụlọ Bel-birịt+ nye ya, Abimelek wee jiri ya goo ndị na-enweghị ihe ha na-arụ na ndị na-akparị mmadụ,+ ka ha soro ya gaa.
5 E mesịa, ọ gara n’ụlọ nna ya dị n’Ọfra+ gbuo ụmụnne ya,+ bụ́ ụmụ Jerọbel, ndị ikom iri asaa, n’elu otu nkume, ma o gbughị Jotam bụ́ ọdụdụ nwa Jerọbel, n’ihi na ọ gara zoo.
6 Ndị niile nwe ala Shikem na ndị niile bi n’ụlọ Milo+ wee zukọta gaa mee Abimelek eze,+ n’akụkụ nnukwu osisi,+ bụ́ ogidi dị na Shikem.+
7 Mgbe ha kọọrọ ya Jotam, ọ gara ozugbo guzoro n’elu Ugwu Gerizim+ wee tie mkpu sị ha: “Geenụ m ntị, unu ndị nwe ala Shikem, ka Chineke geekwa unu ntị:
8 “O ruru otu mgbe, osisi dị iche iche gara ịhọpụta eze ga na-achị ha. Ha wee sị osisi oliv,+ ‘Biko, bụrụ eze anyị.’+
9 Ma osisi oliv sịrị ha, ‘M̀ ga-ahapụ mmanụ m na-agba nke na-enye Chineke na mmadụ otuto+ gaa na-aṅagharị n’elu osisi ndị ọzọ?’+
10 Osisi ndị ọzọ wee sị osisi fig,+ ‘Bịa bụrụ eze anyị.’
11 Ma osisi fig sịrị ha, ‘M̀ ga-ahapụ ụtọ m na-atọ na mkpụrụ dị mma m na-amị, m̀ ga-aga na-aṅagharị n’elu osisi ndị ọzọ?’+
12 Osisi ndị ọzọ wee sịzie osisi vaịn, ‘Bịa bụrụ eze anyị.’
13 Osisi vaịn wee sị ha, ‘M̀ ga-ahapụ mmanya ọhụrụ m nke na-eme ka Chineke na mmadụ na-aṅụrị ọṅụ,+ m̀ ga-aga na-aṅagharị n’elu osisi ndị ọzọ?’
14 N’ikpeazụ, osisi ndị ọzọ niile wee sị osisi ogwu,+ ‘Bịa bụrụ eze anyị.’
15 Osisi ogwu wee sị osisi ndị ọzọ, ‘Ọ bụrụ na unu ji ezi obi na-ahọpụta m ịbụ eze unu, bịanụ, gbabanụ na ndò m.+ Ma ọ́ bụghị otú ahụ, ka ọkụ+ si n’osisi ogwu pụta repịa osisi sida+ nke Lebanọn.’+
16 “Ọ bụrụ na unu ji ezi obi na ịkwụwa aka ọtọ mee ihe a, wee mee Abimelek eze,+ ọ bụrụ na ọ bụ ihe ọma ka unu meere Jerọbel na ezinụlọ ya, ọ bụrụkwa na ihe unu mere ya kwesịrị ya,
17 mgbe nna m buuru unu agha,+ tinyekwa mkpụrụ obi ya n’ihe ize ndụ+ ka o wee napụta unu n’aka ndị Midian;+
18 ma unu ebiliwo megide ezinụlọ nna m taa wee gbuo ụmụ ya,+ bụ́ ndị ikom iri asaa,+ n’elu otu nkume, ka unu wee mee Abimelek, bụ́ nwa ohu ya nwaanyị,+ eze+ ka ọ chịwa ndị nwe ala Shikem naanị n’ihi na ọ bụ nwanne unu;
19 ee, ọ bụrụ na ọ bụ ezi obi na ịkwụwa aka ọtọ ka unu ji mee Jerọbel na ezinụlọ ya ihe a taa, ṅụrịanụ ọṅụ n’ihi Abimelek, ka ya onwe ya kwa ṅụrịa ọṅụ n’ihi unu.+
20 Ma ọ bụrụ na ọ bụghị otú ahụ, ka ọkụ+ si n’ebe Abimelek nọ pụta rechapụ ndị nwe ala Shikem na ụlọ Milo,+ ka ọkụ+ sikwa n’ebe ndị nwe ala Shikem nọ nakwa n’ụlọ Milo pụta rechapụ Abimelek.”+
21 Jotam+ wee gbaa ọsọ gbaga Bia, wee biri n’ebe ahụ n’ihi Abimelek nwanne ya.
22 Abimelek wee bụrụ onyeisi Izrel ruo afọ atọ.+
23 Chineke wee kwe ka mmụọ na-adịghị mma+ bata n’etiti Abimelek na ndị nwe ala Shikem, ndị nwe ala Shikem wee ghọọ Abimelek aghụghọ,+
24 ka ihe ike e mesoro ụmụ ndị ikom iri asaa nke Jerọbel wee dịrị n’isi ha,+ ka o wee meekwa ka ọbara ha dịrị n’isi Abimelek nwanne ha n’ihi na o gburu ha,+ ka ọ dịrịkwa n’isi ndị nwe ala Shikem n’ihi na ha nyeere ya aka+ igbu ụmụnne ya.
25 Ndị nwe ala Shikem wee debe ndị mmadụ ka ha chechie ya n’ụzọ n’elu ugwu dị iche iche, ha na-apụnarakwa onye ọ bụla na-agafe ha n’ụzọ ihe o ji. Ka oge na-aga, a kọọrọ ya Abimelek.
26 Geel+ nwa Ibed na ụmụnne ya gafetara Shikem,+ ndị nwe ala Shikem wee malite ịtụkwasị ya obi.+
27 Ha wee gaa n’ubi dị ka ha na-eme wee malite ịghọ mkpụrụ vaịn dị n’ubi vaịn ha, na-azọcha ya, na-aṅụrịkwa ọṅụ,+ ha wee banye n’ụlọ chi ha,+ na-eri, na-aṅụ,+ na-akọchakwa+ Abimelek.
28 Geel nwa Ibed wee sị: “Ònye bụ Abimelek,+ ònyekwa bụ Shikem, nke ga-eme ka anyị na-ejere ya ozi? Ọ́ bụghị nwa Jerọbel,+ ọ́ bụghị Zibọl+ bụ onye na-elekọta ihe o nwere? Jewerenụ ndị Hemọ,+ nna Shikem, ozi, unu ndị ọzọ, gịnị mere anyị onwe anyị ga-eji na-ejere ya ozi?
29 A sị nnọọ na ndị a nọ m n’aka!+ M ga-ewepụ Abimelek.” O wee gaa n’ihu ịgwa Abimelek, sị: “Mee ka ndị agha gị dị ọtụtụ, chịrịkwa ha pụta.”+
30 Zibọl bụ́ onyeisi obodo ahụ wee nụ ihe Geel nwa Ibed+ kwuru. O wee wee iwe dị ọkụ.
31 O wee jiri aghụghọ zigara Abimelek ndị ozi, sị: “Lee! Geel nwa Ibed na ụmụnne ya abịawo na Shikem,+ lee, ha na-eme ka ndị obodo zukọta ibuso gị agha.
32 Bilie n’abalị,+ gị na ndị so gị, gaa zoo n’ọhịa chebiri ha.+
33 Ọ ga-erukwa, n’ụtụtụ, ozugbo anyanwụ wara, ị ga-ebili n’isi ụtụtụ, ị ga-awakpo obodo ahụ; mgbe ya na ndị so ya pụtawara ibuso gị agha, mee ya ihe ọ bụla ruru gị aka ime ya.”
34 Abimelek na ndị niile so ya wee bilie n’abalị, ha wee kee onwe ha ụzọ anọ gaa zoo chebiri Shikem.
35 E mesịa, Geel+ nwa Ibed pụrụ gaa guzoro n’ọnụ ụzọ ámá obodo. Abimelek na ndị so ya wee bilie n’ebe ha zoro.
36 Mgbe Geel hụrụ ha, ọ gwara Zibọl ozugbo, sị: “Lee! Ndị mmadụ si n’elu ugwu na-agbadata.” Ma Zibọl sịrị ya: “Ihe ị na-ahụ bụ onyinyo ugwu ma chee na ha bụ mmadụ.”+
37 E mesịa, Geel kwuru ọzọ, sị: “Lee! Ndị mmadụ si n’etiti ala ahụ na-agbadata, otu ìgwè si n’ụzọ e si aga n’ebe osisi ukwu nke Meọnenim dị na-abịa.”
38 Zibọl wee sị ya: “Oleezi isi ọnụ ahụ i turu,+ sị, ‘Ònye bụ Abimelek, nke ga-eme ka anyị na-ejere ya ozi?+ Ọ́ bụghị ndị a bụ ndị ị jụrụ ajụ?+ Biko, gaa ugbu a buso ha agha.”
39 Geel wee duru ndị nwe ala Shikem pụọ, malite ibuso Abimelek agha.
40 Abimelek wee chụwa ya, o wee si n’ihu ya gbaa ọsọ; ọtụtụ ndị e gburu wee na-ada ruo n’ọnụ ụzọ ámá.
41 Abimelek wee biri n’Aruma, Zibọl+ wee chụpụ Geel+ na ụmụnne ya ka ha ghara ibikwa na Shikem.+
42 O wee ruo n’echi ya na ndị obodo ahụ pụrụ gawa n’ọhịa. Ha wee kọọrọ Abimelek+ ihe merenụ.
43 O wee kpọrọ ndị agha ya kee ha ụzọ atọ+ ma zoo chebiri ha n’ọhịa. O wee lee anya, ma, lee, ndị mmadụ si n’obodo na-apụta. O wee bilie buso ha agha, gbuo ha.
44 Abimelek na ndị agha so ya gbaara ọsọ gaa guzoro n’ọnụ ụzọ ámá obodo, ebe ìgwè abụọ gbaara gaa buso ndị niile nọ n’ọhịa agha, ha wee gbuo ha.+
45 Abimelek busoro obodo ahụ agha ụbọchị ahụ dum wee weghara obodo ahụ; o wee gbuo ndị nọ n’ime ya,+ kwatuo obodo ahụ+ ma wụọ ya nnu.+
46 Mgbe ndị niile nwe ala, bụ́ ndị bi n’ụlọ elu Shikem, nụrụ ya, ha gara ozugbo n’ebe dị n’okpuru ala n’ụlọ El-birịt.+
47 E wee kọọrọ Abimelek na ndị niile nwe ala bụ́ ndị bi n’ụlọ elu Shikem agbakọtawo ọnụ.
48 Abimelek wee gbagoo n’Ugwu Zalmọn,+ ya na ndị niile so ya. Abimelek wee were anyụike o ji n’aka gbute otu alaka osisi, buru ya tụkwasị n’ubu ya wee gwa ndị so ya, sị: “Ihe unu hụrụ m mere—ngwanụ, meenụ ya!”+
49 Onye ọ bụla n’ime ndị agha ahụ niile wee gbute otu alaka osisi ma soro Abimelek n’azụ. Ha wee tụkwasị ya n’ebe ahụ dị n’okpuru ala ma gbaa ụlọ ahụ ọkụ, ndị niile bi n’ụlọ elu Shikem wee nwụọ, ihe dị ka otu puku mmadụ, ma ndị ikom ma ndị inyom.+
50 Abimelek wee gaa Tibez+ buso Tibez agha wee weghara ya.
51 Ebe ọ bụ na otu ụlọ elu siri ike dị n’etiti obodo ahụ, ọ bụ n’ime ya ka ndị ikom niile na ndị inyom niile na ndị niile nwe ala n’obodo ahụ gbabara, ha wee mechie ụzọ ya mgbe ha banyechara, wee rịgoro n’elu ụlọ elu ahụ.
52 Abimelek wee rịgoro n’ụlọ elu ahụ malite ibuso ya agha, o wee garuo nso n’ọnụ ụzọ ụlọ elu ahụ ka ọ gbaa ya ọkụ.+
53 Otu nwaanyị wee tụọ Abimelek nkume igwe nri n’isi wee kụrie ya okpokoro isi.+
54 O wee kpọọ nwa okorobịa na-eburu ya ngwá agha ngwa ngwa, sị ya: “Mịrị mma agha gị gbuo m,+ ka ha ghara ikwu banyere m, sị, ‘Ọ bụ nwaanyị gburu ya.’” Onye na-ejere ya ozi wee magbuo ya ozugbo.+
55 Mgbe ndị Izrel hụrụ na Abimelek anwụọla, onye ọ bụla lara n’ebe obibi ya.
56 Chineke wee si otú a mee ka Abimelek jiri isi ya buru ihe ọjọọ o mere nna ya site n’igbu ụmụnne ya iri asaa.+
57 Chineke mekwara ka ndị Shikem jiri isi ha buru ihe ọjọọ niile ha mere, ka nkọcha+ Jotam+ nwa Jerọbel+ kọchara ha wee mezuo n’isi ha.+
Ndị Ikpe 9
mailto:?body=Nọrọ Ebe A Gụọ Baịbụl%0a%0ahttps%3A%2F%2Fwww.jw.org%2Ffinder%3Fdocid%3D1011452%26Book%3D7%26Chapter%3D9%26wtlocale%3DIB%26srcid=share⊂ject=Nọrọ Ebe A Gụọ Baịbụl